With Exactspy uzobona wonke imilayezo ethunyelwe SMS noma wathola an iPhone, Target phone Android, ngisho nalabo okungenzeka ukuthi ususiwe.
Exactspy-App To Spy On Text Messages Free kukuvumela ngomkhondo imilayezo ye-SMS (wakha-in kwesicelo on amafoni smartphone) ukuthi ithunyelwa futhi wathola nge ilitshe amafoni, Lesi sici kukuvumela ukufunda yonke imilayezo angenayo naphumayo SMS, ngisho uma omunye ukusulwa. Ungakwazi Inhloli Imilayezo SMS Old, funda yonke imiyalezo lelitshe uthola / ithumela. With Exactspy you also can:
Bheka SMS lemeyili Target futhi wathumela izigijimi
Funda okuqukethwe full of yonke imilayezo
Bheka amagama umuntu nezinamba zabantu kule izingxoxo SMS.
Thola isikhathi nosuku kufakazela ukuba bazi lapho wengxoxo ngamunye bathatha indawo.
Kungani You Need Exactspy-App To Spy On Text Messages Free.
Ingabe ukhathazekile ngalokho kungenzeka izingane zakho ukuthayipha ngaphansi ukuvutha the screen ebusuku? Ingabe udinga izinto obala phezu isisebenzi imiyalezo amafoni inkampani? Exactspy ikuvumela ukuba bafunde iqiniso mayelana yimuphi umyalezo, ingxoxo noma contact igama. Uma unokukhathazeka, Exactspy Isici kuzokusiza ukuqinisekisa iqiniso. Ungaphuthelwa yimuphi umyalezo obalulekile more.
Ngezinye izikhathi azi lokho omkhaya wakho noma abasebenzi imiyalezo kungavimbela enkingeni. Ukuqinela noma avuzayo ulwazi yenkampani nje zimo ezimbalwa lapho lesi sici kuza Ukugunda. Yonke imiyalezo kuthiwa ngobunono ihlelwe yaba Control Panel futhi ungakwazi ukufinyelela nini.
For Amadivayisi iOS:
Ungahlola iMessage ingxoxo.
Ama-app android inhloli imiyalezo,en, Insiza inhloli imiyalezo free, best free android spy apps, Ingabe ikhona lokusebenza free inhloli imiyalezo, Is there anyway to spy on text messages, Inhloli someones imiyalezo yombhalo free
→ ExactSpy – Cell Phone Tracker GPS Free